အလယ်ပိုင်း Anatolia ဒေသ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး
ဗဟို Anatolia ဒေသကြီးရထားလမ်း, မြို့လမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုသတင်းဖတ်ရှုဖို့မြေပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
EGO ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Nihat Alkaşသည်သူ၏ရုံးခန်းရှိဘတ်စ်ကားမောင်းသူများကိုလက်ခံပြီးသူတို့၏စံပြအပြုအမူအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုပေးခဲ့သည်။ EGO ဘတ်စ်ကားမောင်းသူHacı Ali Çiğdemသည် Sihhhiye-Ulus လိုင်းနှင့် [ပို ... ]
ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များဖွင့်လှစ်ခြင်းသည် Gar Waiting ခန်းမတွင် Ali Çetinkayaဘူတာမှစီစဉ်ထားသောကျန်းမာရေးအသိအမြင်မြှင့်တင်ခြင်းအခမ်းအနားတွင် TCDD ၇ ကြိမ်မြောက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၊ [ပို ... ]
Konya Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုတို့ ပူးပေါင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်မည့် KONYARAY ရထားလမ်းစီမံကိန်းလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပ Metropolitan မြူနီစီပယ် Mevlana ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ, Konya မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်၌ကျင်းပအခမ်းအနားမှာမိန့်ခွန်း [ပို ... ]
Kayseri Erciyes A.Ş. သင်တန်းသားများအနေဖြင့်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချိန်ကိုပေးသောစုံတွဲများ၏စွတ်ဖားပြိုင်ပွဲဖြစ်သော“ Become With Now Withdrawal Now” ပြိုင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Erciyes တွင်ဆဌမအကြိမ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီကာလအတွင်း [ပို ... ]
Kaymaklıမြူနီစီပယ်လူမှုရေးမြူနီစီပယ်၏နိယာမနှင့်အတူ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်။ Kaymaklıမြူနီစီပယ်ဒေသခံအစီအစဉ် 21 မြို့ကောင်စီ, Erciyes ခရီးစဉ်ကိုအမျိုးသမီးကောင်စီမှစီစဉ်ခဲ့သည်။ မိန်းမတရာနီးပါးသည် Erciyes ရှိခရီးစဉ်၊ ကေဘယ်လ်ကြိုးနှင့်နှင်းလျှောစီးအပျော်အပါးသို့တက်ရောက်စဉ် [ပို ... ]
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိမြို့ကြီးများ၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအညွှန်းကိုသုတေသနပြုချက်အရ Konya သည်နိုင်ငံပေါင်း ၅၆ နိုင်ငံမှမြို့ပေါင်း ၄၁၆ မြို့တွင် ၃၂၉ ခုမြောက်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးအသွားအလာဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုတစ်ခုအရကမ္ဘာ့အသွားအလာသည် [ပို ... ]
Konya တွင်ပြုလုပ်မည့် KONYARAY ခရီးသည်လိုင်း၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို Konya Metropolitan Municipality мэрမြို့တော်ဝန်Uğurİbrahim Altay နှင့် TCDD General Manager Ali İhsan Uygun တို့တက်ရောက်မည်။ Konya မြို့တော်ဝန်Uğurğbrahim [ပို ... ]